တလွဲတွေနဲ့ နေသားတကျ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
( ထမင်းသိုးဟင်းသိုး ) ပို့စ်အသစ်ပါပဲ.........
အဲဒီလိုမျိုးတလွဲဖြစ်နေတာကိုက ကိုယ့်ကိုယ် ဗမာ ဆိုတာမမေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ.....
အင်းး တကယ်တော့ အလွဲနဲ့ နေသားကျနေတာက ကောင်းလား.. တည့်မှကောင်းမှာလား..။ ဘယ်လိုစံနဲ့ သတ်မှတ်ရပါ့မလဲ ဆိုတာတွေနဲ့...။ တခါတလေ..တကယ်ပဲ မျက်ရည်ဝဲပါရဲ့။
Very glad to see you in the Myanmar blogger's world. I had been reading your short stories ...10 years back.
မမေငြိမ်းရဲ့ ဘလော့အညွှန်းစာက တဆင့် ရောက်လာတာပါ။ ကျနော် ပုံမှန် လာဖတ်ရမယ့် ဘလော့ဂ်ကောင်းတခု ထပ်တိုးလို့ ဖေးဘရိတ်ထဲမှာ ထည့်သိမ်းထားလိုက်ပြီ အမ။ နောက်ထပ် ရေးလာဦးမယ် စာကောင်းတွေ အများကြီး ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။
သတင်းစာဖတ်ရင် နောက်ဆုံးကနေ စစလှန်တာ ခုထိ အကျင့်က မပျေက်သေးဘူး။ ကိုယ်ကဗမာကိုး
မမိုးချိုသင်းရဲ့ စာတွေကို ပုံရိပ်နှစ်နှစ်သက်သက် ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အခုဘလောက် လုပ်ထားတာ တွေ့ရတဲ့လို့ ၀မ်းသာတယ်။ နောက်လာခဲ့ဦးမယ်။ လင့်ခ်လုပ်ပါရစေ။
ဆရာမ ဒေါ်မေငြိမ်း ညွှန်းလို့ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အရေးအသားကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်မိပါတယ်။ ပုံမှန်ဖတ်ရမယ့် ဖေးဘရိတ်ဘလော့ခ်ဂါထဲ ထည့်ဖို့ တစ်ခုတိုးလာတာပေါ့။ စာပေကောင်းတွေ ဖတ်ရဖို့ တစ်ယောက်ထပ်တိုးလာတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိမိပါတယ် :)
ဒီရောက်ခါစက လိုအပ်တဲ့ မ၀ယ်မဖြစ် ၀ယ်ရမယ့် ပစ္စည်းစာရင်းထဲမှာ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကို ထည့်ထားပြီး
၀ယ်လဲဝယ်ထားမိတယ်။ ကိုယ်က ဗမာကိုး။ :-P
သတင်းစာဖတ်ရင် နောက်က စလှန်မိတယ် ကိုယ်က ဗမာကိုး...။
ဂျပန်ဆိုတော့ အဲဒါမှန်သွားတယ်ဗျ။ ဟီး..။ (မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းကလဲ အမှန်က သတင်းစာ အိမ်မှာ မ၀ယ်တာ ကြာလှပေါ့..)
မီးပျက်ရင် ခက်မှာဆိုးလို့ လက်နှိပ်ဓာတ်မီး ၀ယ်လိုက်မိတယ်. ကိုယ်က ဗမာကိုး...။
ရာသီဥတုသတင်းများ ရောက်စက လုံးဝ မယုံခဲ့မိဘူး အမအတိုင်းပဲ.. ကိုယ်က ဗမာကိုး...။
ရောက်စကဆိုရင် ရထားစီးရင် အချိန်ထက် ပိုပီးစောရောက်နေမိတတ်တယ် စိတ်မချလို့လေ.. ကိုယ်ကဗမာကိုး...။
...ပြောရရင်တော့.. ကိုယ်က ဗမာကိုးးးးးးးးးးး....
အမစာတွေ အစကတည်းက ကြိုက်တာ အမရေ.. များများလေးရေးပါ..နော်..။
ကျနော်ကတော့ လွဲသွားတာ သဘောကျသဗျ မလွဲလို့ကတော့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့ ထောက်လှမ်းရေး တွေလက်ထဲ ဘာဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့မလဲ? အသံလွှင့် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်းပြောတာ လေ" လွဲသွားပြီ ကိုစောခိုင်" တဲ့။
အသက်ကလဲ ကြီးလာပြန်တော့ ဟိုတနေ့က သွေးတိုး တာ ကံကောင်းလို့၊ ကိုသေမင်းကို ပြောလိုက်တယ် လွဲသွားပြီ ကိုစောခိုင်ပေါ့။
ဒီpostလေးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်.. ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကဗမာကိုး…
မူရင်း ပို့စ် လေးရယ်..comments လေးတွေရယ်ကို ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ် အမှန်တွေမို့လို့ သဘောလည်းကျတယ်...
ဘိုင်ဒဝေးးးးး.....ကိုယ်က ဗမာကိုး… :P
i like your writing. your are reallyagood writer.
I was touched by this post because I amaBurmese.
As I saw police at university compound, I was excited because I am fromBurma. I asked my friends many times about those police . My friend said police some time eat at university food center because it is cheap and clean. Nothing special. How ever I feel very unease whenever I see police in uni compound because I amaburmese.
I also count my money when I draw it from bank because I amaburmese.
So we Burmese are very much different from other.